လူမှုမီဒီယာစျေးကွက်ရှာဖွေရေးစာရင်းအင်းသင်မလွယ်ကူ! | Martech Zone
တနင်္လာနေ့, ဖေဖော်ဝါရီလ 13, 2017 စနေနေ့, ဖေဖော်ဝါရီလ 13, 2021 Douglas Karr
လွန်ခဲ့သောဆယ်စုနှစ်များစွာကကျွန်ုပ်တို့သည်ပျမ်းမျှအိမ်ထောင်စုတစ်စုတွင်ရေဒီယို၊ ထို့နောက်တယ်လီဖုန်းနှင့်နောက်ဆုံး၌ရုပ်မြင်သံကြားစက်တစ်လုံးရှိကြောင်းကျွန်ုပ်တို့စတင်သဘောပေါက်ခဲ့သည်။ ကျနော်တို့နှင့်အတူကြောင်းပြည့်နှက်ရောက်ရှိနေပြီယုံကြည်ပါတယ် လူမှုမီဒီယာ…လူမှုရေးမီဒီယာကဒီမှာဆက်နေရန်စီးပွားရေးအကျိုးသက်ရောက်မှုကိုတွက်ချက်ရန်ကြိုးစားရန်ကျွန်ုပ်တို့အမှန်တကယ်လိုအပ်ပါသလား။ ဟုတ်ပါတယ်၊ မထင်ပါဘူး
သို့သော်စျေးကွက်သမားများက Snapchat အပေါ်တွင်အရာအားလုံးကိုဖယ်ရှားပြီးအလောင်းအစားလုပ်ရန်အချိန်ရောက်ပြီဟုမဆိုလိုပါ။ ဘောပင်နှင့်စက္ကူကိုသုံးသောရိုးရာစက်မှုလုပ်ငန်းများ၊ ဝင်ငွေတိုက်ရိုက်စီးဆင်းနေသောကုမ္ပဏီများ၊ ရိုးရာမီဒီယာကိုလုပ်ကိုင်သောကုမ္ပဏီများအတွက်အမြတ်အစွန်းများစွာကျန်ရှိနေသေးသည်။ စင်စစ်အားဖြင့်ရိုးရာစျေးကွက်သည်လူ ဦး ရေ၏အစိတ်အပိုင်းများကိုခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်စွမ်းတွင်ကြီးထွားလာနေသည်။ ငါပြန်လည်နွေးနွေးထွေးထွေး ... ရဲ့လူမှုမီဒီယာစျေးကွက်ရှာဖွေကြကုန်အံ့။ ဒီဟာကြီးတယ်
လူမှုရေးမီဒီယာကို ၂၀၁၇ ခုနှစ်တွင်တိုးမြှင့်ရန်သင်စဉ်းစားနေပါသလား။ သင်၏နည်းဗျူဟာကိုဖော်ဆောင်ရန်နှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရန်ကူညီရန်အချက်အလက်များနှင့်ကိန်းဂဏန်းများလိုအပ်ပါသလား။ Wordstream သည်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ကောင်းသောလူမှုမီဒီယာစျေးကွက်ရှာဖွေရေးအချက်အလက်များကိုမျှဝေခဲ့သည် ဒီမကြာသေးမီက post, ငါတို့ကအောက်မှာဖော်ပြထားတဲ့ infographic ကုသမှုပေးခဲ့တယ်။ ၀ က်ဘ်ဆိုက်ဒီဇိုင်း၏တည်ထောင်သူနှင့်မန်နေးဂျင်းဒါရိုက်တာ Mark Walker-Ford
သင်ကြည့်ချင်သောဆိုရှယ်မီဒီယာနှင့်ပတ်သက်ပြီးစိတ် ၀ င်စားဖွယ်ကောင်းသော၊ Wordstream.
လူမှုမီဒီယာလူ ဦး ရေဆိုင်ရာစာရင်းအင်းများ
အင်တာနက်သုံးစွဲသူ ၇၅ ရာခိုင်နှုန်းသည် Facebook ပေါ်တွင်လည်းရှိသည် အမျိုးသမီးအင်တာနက်အသုံးပြုမှု၏ ၈၃ ရာခိုင်နှုန်းသည်
ဆယ်ကျော်သက် ၃၂% Instagram ကိုအရေးအပါဆုံးလူမှုရေးကွန်ယက်တစ်ခုအဖြစ်သတ်မှတ်သည်
အမျိုးသမီးအင်တာနက်သုံးစွဲသူများသည် Instagram ထက်ယောက်ျားများထက် Instagram ကိုပိုမိုအသုံးပြုကြသည် ၃၈% နှင့် ၂၆%
ကောလိပ်ဒီဂရီရှိသောအင်တာနက်အသုံးပြုသူ ၂၉ ရာခိုင်နှုန်းသည် Twitter ကိုအသုံးပြုကြသည် အထက်တန်းကျောင်းဒီဂရီသို့မဟုတ်ထိုထက်နည်းနှင့်အတူ 20%
အနှစ်တစ်ထောင်၏ 81% တစ်ရက်ကိုအနည်းဆုံးတစ်ကြိမ် Twitter ကိုစစ်ဆေးပါ
အများစုမှာ Instagram ကိုအသုံးပြုသူများဖြစ်ကြသည် 18-29 နှစ်အကြားအကြောင်းကိုခြောက်လ -In- တဆယ်အွန်လိုင်းလူကြီးများ
ကမ္ဘာ့လူ ဦး ရေရဲ့ ၂၂% Facebook ကိုအသုံးပြုသည်
LinkedIn ထက်ပိုပါတယ် သန်း ၄၅၀ သုံးစွဲသူ profile များကို
ပေးထားသောမည်သည့်နေ့၌မဆို Snapchat သည်အသက် ၁၈ မှ ၃၄ နှစ်အရွယ်ရှိ ၄၁ ရာနှုန်းသို့ရောက်ရှိသည် US မှာ
Youtube တစ်ခုလုံးနှင့်မိုဘိုင်းတစ်ခုတည်းတွင်ပင် Youtube၊ US ရှိမည်သည့်ကေဘယ်ကွန်ယက်ထက်မဆိုအသက် ၁၈-၃၄ နှင့် ၁၈-၄၉ နှစ်ကြားရှိသူများကိုကျော်လွန်သည်
Facebook သည်အမေရိကန်အင်တာနက်အသုံးပြုသူ ၇၉ ရာခိုင်နှုန်းဖြင့်အများဆုံးအသုံးပြုသောလူမှုမီဒီယာပလက်ဖောင်းဖြစ်သည် စုစုပေါင်းလူ ဦး ရေအပေါ် အခြေခံ၍ (အင်တာနက်အသုံးပြုသူများသာမက) အမေရိကန်လူကြီး ၆၈ ရာခိုင်နှုန်းသည် Facebook တွင်ရှိသည်။
သုံးစွဲသူများ၏ ၃၂% နှင့်အတူ Instagram သည်ငွေတံဆိပ်ကိုရရှိသည် Pinterest သည် ၃၁%၊ LinkedIn နှင့် Twitter တို့မှာ ၂၉ ရာခိုင်နှုန်းနှင့် ၂၄ ရာခိုင်နှုန်းအသီးသီးဖြင့်တတိယနေရာတွင်ရပ်တည်နေသည်။
၂၀၁၆ ခုနှစ်အတွင်း Facebook သုံးစွဲသူ ၇၆ ရာခိုင်နှုန်းသည်နေ့စဉ်လာရောက်ကြည့်ရှုသူ ၁.၆ ဘီလီယံနှင့်အတူ ၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင်နေ့စဉ်ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုခဲ့ကြပြီး ၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင်သုံးစွဲမှု၏ ၇၀% ရှိသည်။
ပျမ်းမျှ LinkedIn အသုံးပြုသူသည်တစ်လလျှင် ၁၇ မိနစ်မျှသာအသုံးပြုသည်
၅၁ ရာခိုင်နှုန်းသော Instagram သုံးစွဲသူများသည် platform ကိုနေ့စဉ်အသုံးပြုကြပြီး ၃၅% က platform ကိုတစ်နေ့လျှင်အကြိမ်ကြိမ်ကြည့်သည်ဟုဆိုကြသည်
ဆိုရှယ်မီဒီယာစာမျက်နှာများတွင်သုံးစွဲသောအချိန်၏ ၈၀% နီးပါးသည်ဖြစ်ပျက်နေသည် မိုဘိုင်းပေါ်တွင်
ကေတီပယ်ရီရှိတယ် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးရှိ twitter နောက်လိုက်များ94.65 သန်းမှာ
ကျော် တစ်နေ့လျှင် Snapchat ပေါ်တွင် SNAP သန်း ၄၀၀ မျှဝေမျှထားသည်နှင့်ဓာတ်ပုံ ၉၀၀၀ နီးပါးကိုစက္ကန့်တိုင်းမျှဝေကြသည်
ရုံ ၁၀,၀၀၀ Youtube ဗွီဒီယိုများ ထက်ပိုမို 1 ဘီလီယံအမြင်များထုတ်ပေးပါပြီ
ထက်ပိုပြီး အားလုံး Youtube ကိုအမြင်များ၏ထက်ဝက် မိုဘိုင်းကိရိယာများပေါ်တွင်ဖြစ်ကြသည်
Instagram သည်တစ်နှစ်လျှင်မိုဘိုင်းကြော်ငြာဝင်ငွေဒေါ်လာ ၅၉၅ သန်းရရှိသည်
အလုပ်မှထုတ်ပယ်ခြင်းနှင့်အမှုဆောင်များကုမ္ပဏီမှထွက်ခွာသွားခြင်းသတင်းများရှိသော်လည်း တွစ်တာရဲ့ဝင်ငွေက ၈% တိုးလာတယ်
အမေရိကန်လူမျိုး 59% ဆိုရှယ်မီဒီယာအကောင့်များကထင်မြင်ယူဆသည်မှာဆိုရှယ်မီဒီယာမှတစ်ဆင့်သုံးစွဲသူဝန်ဆောင်မှုသည်မေးခွန်းများကိုဖြေဆိုရန်နှင့်ပြissuesနာများကိုဖြေရှင်းရန်လွယ်ကူစေသည်
ကျော် ၁၇ သန်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်း Facebook Business Pages ကိုသုံးပါ
စီးပွားရေး ၂ သန်း ကြော်ငြာအတွက် Facebook ကိုသုံးပါ
Facebook ရဲ့ စုစုပေါင်းဝင်ငွေ 56% ကြီးပွားသတည်း ၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင်ကြော်ငြာဝင်ငွေ ၅၉% တိုးတက်ခဲ့သည်
Pinterest အသုံးပြုသူ ၉၃ ရာခိုင်နှုန်း ဝယ်ယူမှုစီစဉ်သို့မဟုတ်လုပ်ဖို့ပလက်ဖောင်းကိုအသုံးပြုပါ
LinkedIn အသုံးပြုသူ ၃၉% လစဉ်ပရီမီယံအကောင့်များအတွက်ပေးဆောင်
Pinterest သည် ၂၅ ရာခိုင်နှုန်းမောင်းနှင်သည်။ အားလုံးလက်လီက်ဘ်ဆိုက်လွှဲပြောင်းအသွားအလာ၏
ထက်ပိုပြီး အွန်လိုင်းလူကြီးများ၏ ၅၆% တစ် ဦး ထက်ပိုသောလူမှုမီဒီယာပလက်ဖောင်းကိုအသုံးပြုပါ
ပုံများပါသော tweets များသည်ပုံများမပါသော tweets များထက်ကလစ် ၁၈% ပိုများသည်
အစားအစာသန်း ၁၀၀ နှင့်ဖက်ရှင်ပျဉ်ပြား ၁၄၆ ခုရှိသည် Pinterest
LinkedIn တွင် ၉၈% သောပုံများနှင့်ပါသည့်ပို့စ်များသည်မှတ်ချက်များပိုမိုရရှိပြီး၊ တစ် ဦး 200% ပိုမိုမြင့်မားထိတွေ့ဆက်ဆံမှုနှုန်းသည်
ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်အကောင့်အတု ၈၁ သန်းခန့်ရှိပြီး twitter အကောင့် ၅% ခန့်သည်အတုအယောင်များဖြစ်သည်
နာရီသန်း ၁၀၀ ဗွီဒီယိုအကြောင်းအရာများဖြစ်သည် နေ့စဉ် Facebook ပေါ်မှာစောင့်ကြည့်
ထက်ပိုပြီး LinkedIn အသုံးပြုသူ ၁ သန်း long-form ပါ ၀ င်သောအကြောင်းအရာများကိုပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခဲ့ပြီး long-form ရေးသားချက်များကို ၁၆၀,၀၀၀ ကိုအပတ်စဉ်ထုတ်ဝေပြီး ၁၉.၇ သန်းကျော် SlideShare တင်ဆက်မှုများကိုစင်မြင့်သို့တင်ထားသည်။
၀ န်ထမ်း ၁၀၀ ကျော်ရှိသော ၈၈ ရာနှုန်းသောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအတွက် twitter ကိုသုံးပါ
အသုံးပြုသူမှတင်သွင်းထားသော Youtube ဗွီဒီယိုသည်အများဆုံးနှင့်အတူဖြစ်သည် ချာလီကကျွန်မလက်ချောင်းကိုကိုက်လိုက်တယ် ကြည့်ရှုသူပေါင်း ၈၄၅ သန်းရှိသည်
ပီဇာက အများဆုံးကျယ်ပြန့်အစားအစာ instagrammedတိုက်ရိုက်ရှေ့ကင်နှင့်ဆူရှီ၏
ဘလော့ဂ်သည် ဆက်လက်၍ ဆက်လက်ရှင်သန်နေသည် 409 လူဦးရေသန်း ပိုမိုကြည့်ရှုသည် 23.6 ဘီလီယံအထိစာမကျြနှာ လတိုင်း WordPress ကိုတစ် ဦး တည်းအပေါ်
ဒီအချက်အလက်တွေကိုကြည့်ပါ ဝဘ်ဆိုက်အနီရောင်ဒီဇိုင်း အရာနှင့်သက်ဆိုင်သောဆိုင်တဲ့စာရင်းဇယားပြုစု ဆိုရှယ်မီဒီယာစျေးကွက်ရှာဖွေရေး.
Tags: 2017Facebook ကinstagramlinkedinအထီး vs အထီးMark Walker-Fordဝဘ်ဆိုက်အနီရောင်ဒီဇိုင်းSnapchatလူမှုမီဒီယာလူမှုမီဒီယာစျေးကွက်လူမှုမီဒီယာစျေးကွက်ရှာဖွေရေးစာရင်းဇယားလူမှုမီဒီယာစာရင်းဇယားဆယ်ကျော်သက်တွစ်တာyoutube က